Naxdin Rasmi Reys Oo Xaaladeyda Laga Deyrinaayo - Fox Articles
Home/wararka degdega ah/Naxdin Rasmi Reys Oo Xaaladeyda Laga Deyrinaayo
David 2 weeks ago	wararka degdega ah
Ilo xog ogaal ayaa inoo sheegay in Rasmi iyo Gabadh ay qaraabo yihiin ay shil galeen ayagoo kusii socda magaalada Garissa.Gaariga ay wateen oo xawaare aad u sare ku socday ayaa sababay shil horseeday in Rasmi dhaawac culus uu soo gaaro.
Waxaa la xaqiijiyay in Rasmi uu dhaawaca kasoo gaaray feeraha iyo gacanta bidix. halka Dareewalkii gaariga iyo gabadhii safarka Rasmi ku wehlinaysay ay bad qabaan. inkastoo uu jiro dhaawac fudud oo soo gaaray dareewalka.
fadlan share dheh si loogu soo wada duceeyo
Previous 3 calaamad hadaad leedahay dumarka aad ayee ujecelyihiin || Aqriso
Next Ereyo Jaceyl Oo Romantic Ah